5 Kuhle Izikhangibavakashi For Kids EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Kuhle Izikhangibavakashi For Kids EYurophu
Okuhambayo nezingane kungaba okwakwenzeka noma isikhathi esingcono zokuphila kwakho. Ngenxa natures nabancane bethu 'olinde isifiso sethu sokujabulisa kubo, khona ngokuvamile kungekho umhlabathi ophakathi. Nokho, kunezindlela kuwe ukwenza ukuhamba nezingane kulula ngokwakho. Indlela engcono kakhulu yokwenza kanjalo iwukuba ukuqinisekisa intsha njalo ukwenza okuthile noma ukubona. Ukuze sikusize izigcine zenza okuthile, sike benza uhlu 5 ezikhangayo kangcono izingane e-Europe. Ungakwazi kalula ukufinyelela lezi zindawo ngesitimela. Ake ubuke:
Izikhangibavakashi for Kids e-Italy
I-Italy iyanikezela izinto ezimbalwa ezijabulisa izingane uma uhlangabezana mlando zokungcebeleka akusho bajabule nabo. Ngo Viserba ezokungcebeleka epaki, bakwazi ukubona izinto e-Italy ngo-miniature! Leli paki futhi sibonisa merry-go-round, ebaleni lokudlala, ugibele ahlukahlukene, futhi cinema. Kungenjalo, uma uzithola Rome, ungaya Hydromania amanzi ipaki. Vele ngaphandle waseRoma, lithembisa uquqaba amaslayidi namanzi fun, okwenza kube ephelele izingane.
Izikhangibavakashi for Kids eNgilandi
Omunye ezikhangayo esemqoka izingane eNgilandi iyona Warner Bros. Studios Ukwenza Harry Potter uhambo e London. Nokho, ngokuba wabahloli abasha abanesifiso izimangaliso uhlobo, Natural History eLondon Indawo egcina amagugu esizwe ungumuntu omkhulu. Kukhona inala ziphephile icwecwe lapho bangafundza ngemihambo izibankwakazi kanye uhlelo lomkhathi. Kuyinto enkulu nakho eyenza London kuwufanele ngokuvakashela i imindeni.
Izikhangibavakashi for Kids eNetherlands
Amsterdam ngokuvamile is hhayi Kunconywa njengendlela friendly umndeni- uya khona, kodwa lokho akusho ngeke kube ngaleyo ndlela. izingane, mhlawumbe indawo ejabulisa kakhulu kuba Natura Artis Magistra noma abaculi. Kuyinto zoo omkhulu ephelele aquarium, zokudlala, Zoological Museum, kanye izinkanyezi. Zibonisa ezingaphezu kuka 900 kwezilwane!
Kungenjalo, ungakwazi amabombo Efteling e Kaatsheuvel. Kuyinto enkulu indaba ephathwayo epaki kuleli zwe, nge fantasy isihloko kanye okugxile izinganekwane kanye izinganekwane. Kukhona ugibele eziningi nokuzijabulisa izingane ngubani ziyazithanda inganekwane.
Uma kuziwa kwezokuzijabulisa izingane, Belgium inikeza ingqikithi yayo epakini, Plopsaland. Kuyinto ezimibalabala, egcwele roller coasters nasezindaweni zokudlala, futhi ezihlukahlukene themes kukho konke ingane ukujabulela. It Ubuye ipulazi izilwane izingane ungavakashela, kanye yaseshashalazini kanye isikebhe ugibele.
E-Antwerp liye De Panne Izitimela
Omunye ezikhangayo edume kakhulu izingane ngokungangabazeki Disneyland. Akukona usathola ongcono kunalowo e Paris. Kuyinto ethandwa kakhulu indaba ephathwayo epaki wonke kulo lonke elaseYurophu ngenxa yesizathu. Kunezindawo ezinhlanu ezinezihloko, kanye ugibele eziningi ezihehayo. Ezinye zazo zifaka Parc Asterix, Pirates zaseCaribbean, -Buzz Lightyear Laser Blast futhi Kuyinto Umhlaba Encane. Ukuvakashela Paris neFrance nezingane ayiphelele ngaphandle Disneyland.
Ukulungele unayo i iholide ngiyilibale ne wonke umndeni wakho? Vakashela ezinye 5 ezikhangayo kangcono izingane eYurophu ohlwini lwethu, futhi uzoba ube nobumnandi. Qinisekisa ukuthi ukuhlela iholide lakho kanye ukubhuka amathikithi akho isitimela ngesikhathi!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/best-attractions-kids-europe/- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / pl noma / futhi ngezilimi ezingaphezu.
#ezikhangayo #traveleurope europetrains europetravel i-eurotrip izitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela travelbelgium travelengland travelfrance travelitaly travelnetherlands traveltips